'Ububi Bokuhlala: Siyakwamukela eRaccoon City' kukalwa-R - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'Ububi Bokuhlala: Siyakwamukela eRaccoon City' Kukalwa-R
'Ububi Bokuhlala: Siyakwamukela eRaccoon City' Kukalwa-R
Isikhathi se-Gory Zombie!
by UTrey Hilburn III September 12, 2021
by UTrey Hilburn III September 12, 2021 441 ukubukwa
Yebo, izindaba ezinhle zilokhu ziphuma kokusha Owakhile omubi inkambu yamafilimu. Ngaphezulu kwazo zonke izithombe ezimangazayo nezinembile eziye zathunyelwa kusuka emthini oluhlaza kuya ezikhali nasezindaweni, lokhu Owakhile omubi unemidlalo engqondweni enkulu. Manje kufika isimemezelo sokuthi Uyemukelwa eRaccoon City kukalwa R ngolimi, ukugeleza nodlame olunamandla kuyo yonke indawo. Lokhu kungukusuka okucacile kumafilimu kaPaul WS Anderson noMilla Jovovich abekade exhomeke kakhulu emidlalweni.
Amazwibela we Isakhamuzi Esibi: Siyakwamukela eRaccoon City kuhamba kanjena:
Lapho ikhaya elichumayo le-Umbrella Corporation, iRaccoon City isiyidolobha laseMidwestern elifayo. Uphumo lwenkampani lushiye idolobha liyinkangala… elinokuphisa okukhulu okubi ngaphansi kobuso. Lapho lobobubi buvela, abantu basemadolobheni bashintshwa… futhi iqembu elincane labasindile kumele lisebenzisane ukuthola iqiniso le-Umbrella futhi lenze ubusuku bonke.
Le filimu inohlu olukhulu kakhulu olufaka uKaya Scodelario njengoClaire Redfield, uRobbie Amell njengoChris Redfield, u-Avan Jogia njengoLeon S. Kennedy, uHannah John-Kamen njengoJill Valentine, uTom Hopper njengo-Albert Wesker, uDonal Logue njengoChief Brian Irons, uLily UGao njengo-Ada Wong, uNathan Dale njengoBrad Vickers, noMarina Mazepa njengoLisa Trevor.
Isakhamuzi Esibi: Siyakwamukela eRaccoon City ifika ngoNovemba 24.
Ngabe ujabulile ngokuqondiswa kukaJohannes Roberts Owakhile omubi? Sazise esigabeni sokuphawula.